Andrea Pirlo oo niyad jab weyn ku riday Real Madrid, kadib markii uu sheegay hadal ay ku adag tahay inay maqlaan jamaahiirta Bernabéu – Gool FM
Andrea Pirlo oo niyad jab weyn ku riday Real Madrid, kadib markii uu sheegay hadal ay ku adag tahay inay maqlaan jamaahiirta Bernabéu
(Real Madrid) 31 Okt 2018. Ciyaaryahankii hore khadka dhexe ee kooxda Juventus Andrea Pirlo ayaa niyad jab ku riday kooxda Real Madrid kadib markii ka fogeeyay in xili ciyaareedkan ay u dagaalami karaan tartanka Champions League.
39 jirkan ayaa xaqiijiyay in Real Madrid oo ku guuleysatay tartanka Champions League 3-dii sano ee la soo dhaafay aysan xili ciyaareedkan u tartami karin sababa la xiriira xaalada adag ay haatan ku sugan tahay kooxda.
“Kaliya 4 ama 5 kooxood ayaa ugu cadcad inay ku guuleystaan Champions League xilli ciyaareedkan, qeyb kama ahan Real Madrid maadaama ay xili ciyaareed adag qaadaneyso”.
“Juventus, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City iyo Liverpool ayaa ugu cadcad inay ku guuleystaan Champions League xilli ciyaareedkan”.
“Juventus waxay talaabo ka horeysaa dhamaan kooxaha ka soo horjeeda, waxayna sidaas ku cadeesay sanadihii ugu dambeeyay ee lasoo dhaafay”.
“Saaxiibadey halkan waxay ii sheegaan in Cristiano Ronaldo uu yahay ciyaaryahan sarre ee xirfadle ah, sida ay horey u sheegeen dhamaan macalimiintii uu lasoo shaqeeyay”.
“Ma awoodo inaan joojiyo qosolka marka aan daawado Lionel Messi oo ciyaaraya kubada cagta”
RASMI: Paris Saint-Germain oo shaacisay in heshiis cusub ay ka saxiixatay Angel de Maria